Ihe ndị dị mkpa iji mara banyere ịkwụ ụgwọ cha cha n'ịntanetị kacha mma - pisklak.net
Ihe ndị dị mkpa iji mara banyere ịkwụ ụgwọ cha cha n’ịntanetị kacha mma
Eprel 05 14:00 2021 nke Rose Gold Bipute Nkeji edemede a
Zọ kachasị mma iji bulie mmeri gị bụ ịhọrọ cha cha cha cha chara nwere ọnụego ịkwụ ụgwọ dị elu. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke ndị egwuregwu cha cha ọhụụ ga-atụle. RTP bụ ego ole cha cha na-enyeghachi ndị egwuregwu n’ụdị mmeri. Ọzọkwa, n’isiokwu a, anyị na-enye gị ụfọdụ isi ihe dị mkpa gbasara ịkwụ ụgwọ cha cha kacha mma na ntanetị.
# Nkezi RTP (Laghachi na Player) na casinos n’ịntanetị
Ihe dị iche na RTP na RTP nke cha cha nwere ike isi ike. Onu ahia ugwo nke cha cha cha cha ugbu a bu onu ahia zuru oke maka egwuru egwu nile egwuru n’oge oge. Ọtụtụ casinos na-enye ọnụego ụgwọ dị elu mana ọnụego ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ bụ ihe dịka 97%.
# Kachasị elu ugwo Casinos
Onu ogugu nke ugwo onu ahia nke ndi kwesiri ntukwasi obi na ntaneti na Canada nyochara ma nyochaa ya site na ndi nwere onwe ha na ndi na-egwu egwu, dika eCOGRA. Nke a gosipụtara na data ọ bụla ha na-ebipụta bụ nkọwa ziri ezi nke pasent ịkwụ ụgwọ. Yabụ, enyere 10 kacha mma akwụ ụgwọ na cha cha na Canada n’okpuru:
Youtkwụ percentagegwọ pasent: 97.8%
Youtkwụ Speedgwọ Speed: 1 – 2 Days
Youtkwụ percentagegwọ: 97.24%
Speedkwụ Speedgwọ :gwọ: –bọchị 1 – 3
Youtkwụ percentagegwọ pasent: 97.43%
Percentagekwụ percentagegwọ pasent: 96.92%
Youtkwụ Speedgwọ Speed: 0 – 1 .bọchị
Percentagekwụ percentagegwọ pasent: 96.58%
Youtkwụ Speedgwọ :gwọ: –bọchị 2 – 3
Youtkwụ percentagegwọ pasent: 96.87%
Youtkwụ percentagegwọ pasent: 96.41%
Percentagekwụ percentagegwọ pasent: 96.25%
Percentagekwụ percentagegwọ: 96.33%
Percentagekwụ percentagegwọ pasent: 97.5%
# Ndepụta nke egwuregwu kachasị akwụ ụgwọ cha cha cha cha
Oghere: 92 – 98% Craps: 98.6% American Roulette: 94 – 95% Video Poker: 99.5% Baccarat: 98.9% Blackjack: 99%
# Top 5 na-akwụ ụgwọ ohere mpere na ntanetị
8 Obi tọ Charms: 97.40% 777 Ọkachamma: 96.18% Nnukwu Ego: 95.70% Akụ nke Aztec: 95% Wolf Mystic: 94.60%
# Okwu Ikpeazụ
Ọ bụla cha cha player chọrọ ịhọrọ na cha cha na a pụrụ ịdabere na nwere elu payout percent nakwa. N’ihi ya, casinos niile a kpọtụrụ aha n’elu bụ ndị kachasị akwụ ụgwọ n’ịntanetị na Canada.